Brick Fanatics YouTube မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Brick Fanatics YouTube ကို
ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft
14 / 09 / 2021 15 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 66 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft, 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, Brick Fanatics YouTube ကို, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Marvel, အဆိုပါ LEGO Group, YouTube ကို
LEGO ရှိလူကြီးများအတွက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွင်တည်ဆောက်ထားသောအရာကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ
ဗီဒီယို: LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Ideas ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster
07 / 09 / 2021 07 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 87 Views စာ0မှတ်ချက် ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster, Brick Fanatics YouTube ကို, အကာအရံ, Ideas, Lego, Lego Ideas, Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ, အဆိုပါ LEGO Group, Tomáš Letenay, YouTube ကို
နောက်ဆုံး LEGO ကိုငါတို့ပထမဆုံးကြည့်ရာမှာ 21329 Fender Stratocaster နဲ့အတူ Strum Ideas set, မှအသက်ပြန်သွင်းသည်
VIDEO: လူကြီးများအတွက် LEGO 10284 Camp Nou - FC Barcelona ကရှင်းပြသည်
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 167 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, ၁၀၂၈၄ FC Barcelona Camp Nou, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား, art, ဘာစီလိုနာ, Brick Fanatics YouTube ကို, Creator Expert, FC အသင်းဘာစီလိုနာ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, LEGO art, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Lego လက်ဆောင်ပေးမယ်, Lego GWP, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, YouTube ကို
Adults 10284 Camp Nou - FC Barcelona for LEGO အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ၊ မကြာသေးမီက၎င်း၏ဆင်တူမှုများအပါအ ၀ င် Creator Expert
19 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 163 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Brick Fanatics YouTube ကို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Spider-Man, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, YouTube ကို, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
ဗီဒီယို: LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors 'Edition ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
15 / 08 / 2021 16 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 190 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, ၇၅၉၇၉ Hedwig, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, Brick Fanatics YouTube ကို, ရှေ, ရွှေ minifigure, ရွှေရောင်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Hedwig, Hermione granger, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego YouTube, သခင် Voldemort, ဇီးကွက်, ပါမောက္ခ Dumbledore, ပါမောက္ခ McGonagall, ပါမောက္ခ Snape, reviews, Ron Weasley, Rubeus Hagrid, အဆိုပါ LEGO Group, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ, YouTube ကို
LEGO Wizarding World ၏မှော်အတတ်သို့သင်ကိုယ်တိုင်သွားပါ Brick FanaticsHarry Potter အသစ်၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဗွီဒီယို၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်အနားယူရန် LEGO သတ်မှတ်ထားသောတိုင်း
12 / 08 / 2021 12 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 272 Views စာ0မှတ်ချက် Brick Fanatics YouTube ကို, Creator Expert, Ideas, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego Star Wars, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Star Wars, YouTube ကို
ပြန်ထိုင်ပြီးဒီအတိုင်းကြည့်ပါ Brick Fanatics ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်ထားသော LEGO တစ်ခုစီကိုဖြတ်သန်းသည်
အဆိုပါ join Brick Fanatics YouTube အဖွဲ့
12 / 08 / 2021 12 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 116 Views စာ0မှတ်ချက် Brick Fanatics YouTube ကို, Lego, Lego ဂျော့ဘ်, Lego YouTube, YouTube ကို
Brick Fanatics စိတ် ၀ င်စားသောအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများကို p ဖြစ်လာစေသည်art ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောတိုးတက်နေသော YouTube အဖွဲ့၏
ဗီဒီယို: LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors 'Edition ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်
05 / 08 / 2021 05 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 221 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alley, ၇၅၉၇၉ Hedwig, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, 76394 Fawkes Dumbledore ရဲ့ Phoenix, Brick Fanatics YouTube ကို, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား, YouTube ကို
အဖြစ်စောင့်ကြည့် LEGO Group Revelio သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးသီးသန့် Harry Potter set, 76391 Hogw ကိုသရုပ်ဆောင်သည်arts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
ဗွီဒီယို - LEGO Collectible Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 433 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Brick Fanatics YouTube ကို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, YouTube ကို
LEGO Collectible Minifigures series 12 တွင်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော (နှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်) စာလုံး ၁၂ လုံးကိုကြည့်ပါ။ Marvel ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey မှစတူဒီယိုများ